Tilmaamaha xun ee 2014 CMO ee Muuqaalka Muuqaalka Bulshada | Martech Zone
Tilmaamaha xun ee 2014 CMO ee Muuqaalka Muuqaalka Bulshada
Arbaco, Juun 30, 2014 Arbaco, Juun 30, 2014 Douglas Karr
Shalay, waxaan haystay qoraalkan oo aan dhammaystiray waxaanan doonayay inaan gujiyo daabacaadda markii aan biir ku garaacay laptop-kayga. Waxaan rajeynayaa inaysan aheyn karma imaatinka dabadeyda. Laptop-kii wuu badbaaday, laakiin si uun ayaa qoraalka barta loo waayey. Waxaan qorayaa qoraalkan oo ay ku jirto urka daciifka ah ee biirka ee gadaasha ah si aan u xasuusiyo inaan u adkeysto khafiifnimadayda.
Waa tan waxaas, waxaan u maleynayaa in tani ay tahay sawir-xumo aad u xun. Muuqaal ahaan, waxaa ka maqan wax sheegis sheeko guud ah haba yaraatee. Waa si fudud aruurinta fikradaha laga soo ururiyey maqaallada iyo warbixinnada - waxaan aaminsanahay - inay waxyeello xun u geysan doonto habka ay shirkaddu u adeegsaneyso istiraatiijiyad weyn oo warbaahinta bulshada ah si ay ula fal gasho una dhisto ganacsigeeda khadka tooska ah. Looma qaybin B2B, B2C, baaxadda ganacsiga ama qaybta warshadaha. Ugh.
Marka ugu horeysa, uguyaraan, xusid la'aanta dhinaca aadanaha ee bulshada waa iga nixi. Ogaanshaha summaddu la mid ma aha isdhexgalka dadka. Arag astaan ​​waa wacyigalin sumadeed. Aruurinta maamulka iyo kalsoonida khadka tooska ah, wadida booqdayaasha badan si ay u badalaan waa is dhexgal bini aadamnimo oo u baahan ka qeyb qaadasho shucuur leh. Ma aaminsani in wacyigalinta summaddu tahay wajiga koowaad ee adeegsiga baraha bulshada, waxaan aaminsanahay dhisidda sumcad shaqsiyeed inay tahay. Dadku dadku way aaminaan… dadkaas qaarkoodna waxay u shaqeeyaan sumado. Wadahadal kuma lihi mana aqriyo fikradaha noocyada internetka, waan lahadlaa, la wadaagaa oo dadka ka iibsadaa.
Waxba igama gelin taraafikada. Taraafikada dhib malahan ilaa taraafikada ay kexeyso natiijooyinka ganacsiga. Dabeecad iyo beddelaad arrinta ka badan taraafikada. Waan tagi karaa iibsashada xayeysiisyada u kaxeeya boqolaal kun oo ra'yi bog internet, dhib malahan in taraafikadaasi ay khusayso, xiiseyneyso, oo ay u horseedayso waddo loo beddelo. LinkedIn waa "ok" laakiin Facebook waa fiican yahay? Yuu u yahay?
Muuqaalka baraha bulshada waa ma aha oo ku saabsan dhufto ee, waxay ku saabsan tahay waxay sifiican uqabtaan oo aysan sifiican u caawin inay ka caawiyaan ganacsiyada inay la xiriiraan rajadooda iyo macaamiishooda. Halkii laga heli lahaa meheradaha, tani waa inay la hadashaa waxyaabaha aad ka wadaagi karto, sida aad u awoodo inaad la wadaagto, iyo waxa macaamilka ama rajadu ku samayn karto. Ma ka wada xiriiri karaan arrintaas? Miyay kordhin karaan farriintaada dhagaystayaasha aadka u khuseeya? Ma ka iibsan karaan? Fagaareyaasha ayaa iman doona oo tagaya, laakiin dhaqanka bulshada ayaa ah furaha.
Xiriirka macmiilku macno malahan, sirdoonka macaamiisha sameeyo. Waa maxay dareenka sumaddaada internetka? Sidee laguugu aqoonsan karaa marka loo eego tartankaaga? Maxay dadku ugu baahan yihiin warshadahaaga? Si wanaagsan ma u maareyneysaa sumcaddaada? Miyaad ugu adeegaysaa macaamiishaada qaab bulsheed halkaasoo awoodaha adeeggaaga macaamiil si guud loogu wadaago? Maxaad ku qabaneysaa mugga xogta iyo sirdoonka ee halkaa ka jira ee ku saabsan rajadaada iyo macaamiishaada?
Dood la'aan mobile (ka baxsan barnaamijka Instagram), maxaliga ah, Iyo xayeysiinta bulshada? Saddexda dhinac ee warbaahinta bulshada ee abuureysa horumarka ugu badan, guuxa iyo natiijooyinka? Ka waran sida barxad walba looga wada faa'iideysan karo qalabka loona beegsanayo si wax ku ool ah? Ma rumaysan karo in wax macluumaad ah aysan ka jirin arintan markii aad la hadlayso muuqaalka warbaahinta bulshada.
Xitaa ma doonayo inaan guda galo sida SEO ugu sameysay miiska. Haddii aad rabto inaad hubiso infographic weyn oo kaa caawin kara dadaalkaaga suuqgeynta warbaahinta bulshada, hubi Tilmaamaha Goobta ee Baadigoobka Warbaahinta Bulshada, Sidee Ganacsatadu u adeegsanayaan Baraha Bulshada, Mobilka Bulshada ee Deegaanka iyo 36 Xeerarka Warbaahinta Bulshada macluumaad faa iido leh.
Runti waan jeclahay CMO.com - Waxaan halkaa ku aqriyaa macluumaad iyo talo yaab leh maalin kasta, laakiin xogtani waxay gebi ahaanba lumineysaa calaamadda celceliska suuq-geynta si uu uga faa'iideysto warbaahinta bulshada si wax ku ool ah. Kaliya ha ku dharbaaxin miiska Photoshop oo ugu yeer infographic. Hel a naqshad farshaxan infographic ah oo sheeg sheeko ay suuqleydu fahmi karaan, cunaan, aaminaan oo wadaagaan!
Waad iska hubin kartaa faahfaahintan oo waadna igu raacsan tahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado, in kastoo, talooyinka ficil ahaaneed ee aad ka soo ururisay xogtan iyo sida aad ugu adeegsan doonto ganacsigaaga.
Tags: 2014 jawiga bulshadaxun infographicwacyigelinta noocacmoisgaarsiinta macaamiishaFacebookgoogle +infographicnaqshad sameyntaInstagramLinkedInPinterestinfographic liitaSEOslidesharedhalinta taraafikadaTwitteryoutube
Raadinta Xeerarka Wacky ee Mudaaharaadka Facebook iyo Tartanka